Barnoota – Page 9 – siifsiin
Horii Aannanii kunuunsuun Daa’imman kunuunsuudha
Horsiisee Bulaaf horiin isaanii qabeennaa isaaniiti. Jiruu fi jireenni Horsiisee Bulaa horii isaanii irratti waan hundaa’uuf, horiin isaanii kun bu’ura jiruu fi jireenna isaaniiti, jechuun ni danda’ama. Karaa biraatiin horiin isaanii kan isaan jiruu fi jireenyaaf irratti hirkatan kun immoo jireenni isaanii nyaata isaanii (marraa fi bishaan) irratti kan hundaa’u yoo ta’u, nyaanniihorittiis uumamaa fi … Continue reading Horii Aannanii kunuunsuun Daa’imman kunuunsuudha
Seenaa Weellisaa Dooktora kabajaa Aartisti Alii Birraa Kutaa 2ffaa
Aartiin bu’uura jireenya hawaasummaafi beekumsaa akka ta’e jildii keenya lammaffaa keessatti seenaa kabajamaa Dr. Alii Birraa yeroo kaafnetti eeruunkoo niyaadatama. Dr. Aliin akkuma Amarikaa gaheen Afaan Ingilizii akka afaan 2ffaa isaatti barachuu jalqabe. Itti fufuunis yaaxinaalee muuziqaa koolleejjii ‘Saantaa moonikaa’ jedhamu kan Amarikaa Kaalifoorniyaa keessatti argamutti barachuun beekumsa muuziqaa irratti qabus haalaan cimsate. Bara 1989tti … Continue reading Seenaa Weellisaa Dooktora kabajaa Aartisti Alii Birraa Kutaa 2ffaa
Quruphisaafi Goondaa Geggeessummaa seenaan ibsuu
Ganni darbee guyyaa gaariin tokko erga dhufee booda goondaan muraasi gombisaa midhaanii isaan isa yeroo bokkaan coccobu duraa ukkaamfamee tortore gogfachuutti dhama’u turan. Yerosuma quruphisi tokko dhuftee akka isaan midhaan muraasa isheef hambisaniif kadhatte, “Sababiin isaa, salphaadhumatti ani beela’aan jira” isaaniin jette. Tuuti goondaa sunis xiqqoo isheetiif hojjechuu dhiisanii takkaa dhaabbatanii waanti kun seer-bu’uura isaanii … Continue reading Quruphisaafi Goondaa Geggeessummaa seenaan ibsuu